फिलिपिन्ससँग नेपालले जितिसकेको खेल हार्‍यो, गल्ति कस्को ? - MeroKhelkud
फिलिपिन्ससँग नेपालले जितिसकेको खेल हार्‍यो, गल्ति कस्को ?
२०७८ आश्विन २ गते मेरो खेलकुद रिपोर्टर1795LeaveaComment on फिलिपिन्ससँग नेपालले जितिसकेको खेल हार्‍यो, गल्ति कस्को ?
काठमाडौं । अन्तिम समयमा सम्हालिन नसक्दा नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोली फिलिपिन्ससँग पराजित भएको छ । शनिबार उज्वेकिस्तानमा भएको खेलको ८९ मिनेटसम्म अग्रता लिएको नेपाललाई फिलिपिन्सले २-१ गोलले पराजित गर्‍यो।
फिफा वरियतामा ३३ स्थान माथि रहेको फिलिपिन्स विरुद्ध खेलको पहिलो हाफमा विमला चौधरीको गोलबाट नेपालले खेलमा अग्रता लिएको थियो। यता, फिलिपिन्सका लागि खेलको अन्तिम मिनेटमा थानिया अनिसले बराबरी गोल फर्काइन् । इन्ज्युरी समयमा कामिला विल्सनले गोल गर्दै टिमलाई २–१ को जित दिलाइन् ।
नेपालले अब समूह एफको अर्को खेल हङकङसंग असोज ५ गते खेल्नेछ । समूह विजेता बन्दै एसिया कपमा छनोट हुने सम्भावना कायम राख्न नेपालले हङकङलाई हराउनैपर्नेछ । समूहको अन्तिम खेल फिलिपिन्स र हङकङबीच असोज ८ गते हुनेछ ।
फिलिपिन्सलाई हराउँने यस्तो छ नेपाली चेलिहरुको तयारी ( हेर्नुस फोटो फिचर )
वायर्न म्युनिखले फेरी गर्‍यो गोलको बर्षा
रोनाल्डो युभेन्टसको प्रशिक्षणमा फर्कदा फ्यानले गरे भब्य स्वागत ( फोटो फिचर )
२०७८ श्रावण १३ गते २०७८ श्रावण १३ गते मेरो खेलकुद रिपोर्टर
‘ताइपेईविरुद्धको जित अग्रपंक्तिका स्वास्थ्यकर्मीलाई समर्पित’ : प्रशिक्षक अल्मुताइरी
२०७८ जेष्ठ २१ गते २०७८ जेष्ठ २१ गते मेरो खेलकुद रिपोर्टर